प्रियंका किन बिच्किइन् शाहरुखसँग?
23 Aug 2013 | 15:45pm
मुम्बइ- कुनै बेला प्रियंका चोपडा हरेक समय शाहरुख खानको तारिफ गरेर थाक्दिथिन्। जमघटहरुमा शाहरुख खान आफ्नो गुरु भएको बताइरहेकी हुन्थिन्। तर अब समय बद्लिएको छ। प्रियंका शाहरुखको नाम समेत सुन्न चाहँदिनन्।
फिल्म 'जंजीर' को प्रमोशनको क्रममा प्रियंकासँग संञ्चारकर्मीले प्रश्न गरेका थिए- शाहरुखले 'सिंगिंङ करियर' मा कतिको साथ दिए ?' प्रियंकालाई यति भए पुगिहाल्यो। उनी केही हड्बडाइन र भनिन्- 'शाहरुखको कुरा यहाँ कोइ गर्दैन। म तपाइँलाई केही लेख्ने मौका दिन चाहन्न।'
शाहरुख खानको साथमा प्रियंकाले डन, डान २ जस्ता चर्चित फिल्ममा काम गरिन् तर अहिले प्रियंका शाहरुखदेखि टाढा पुगेको चर्चा छ। उनीहरुको बीच कसरी सम्बन्ध बिग्रियो भन्ने बारेमा सबै छक्क परेका छन्।
« नरगिस सिङ्गल? फोटो सेयर गर्दै मनिषा »